မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းသည်စားသုံးမှုအဆို့ရှင်နှင့်အိပ်ဇောအဆို့ရှင် 1D ကုန်ထုတ်လုပ်မှု | 1D;ONE
1. Nickel-Base Superalley
4. Corrosion ကာကွယ်တားဆီးရေး
5. သံ - Keolian အမျိုးအစားသံမဏိအပူခံနိုင်ရည်သည် 200MPA သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
အင်ဂျင်စားသုံးမှုနှင့်အိပ်ဇောအဆို့သည်အင်ဂျင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်သောအခါအပူချိန်မြင့်မားခြင်း, အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ချေးခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲသက်ရောက်မှုများကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကလုပ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင်ပြုပြင်ခြင်း, စုဝေးခြင်းနှင့်အသုံးပြုရန်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီမပြုလုပ်ပါ။ အဆို့ရှင်နှင့်ဆက်စပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေးသည်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ အဆို့ရှင်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပေါ်ဖွယ်ရှိသည်။
အဆို့ရှင်၏ function သည်အင်ဂျင်သို့လေထဲသို့0င်ရောက်ပြီးလောင်ကျွမ်းသောဓာတ်ငွေ့များကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းအတွက်အထူးတာဝန်ရှိသည်။ အင်ဂျင်ဖွဲ့စည်းပုံအရ၎င်းကိုဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်နှင့်အိပ်ဇောအဆို့ရှင်သို့ခွဲခြားထားသည်။ စားသုံးမှုအဆို့ရှင်၏ function သည်အင်ဂျင်ထဲသို့လေထဲသို့ဆွဲ။ လောင်စာဖြင့်လောင်ကျွမ်းစေသည်။ အိပ်ဇောအဆို့ရှင်၏ function သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလောင်းရန်နှင့်ပျောက်ကွယ်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။